Saayinsistoonni Jarmanii ‘aduu namtolchee’ irratti qorannoo taasisaa jiru - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Saayinsistoonni Jarmanii ‘aduu namtolchee’ irratti qorannoo taasisaa jiru
Qorattoonni biyya Jarmanii ‘aduu namtolchee guddittii addunyaa’ waan jedhanii moggaasan irratti qorannoo addaddaa geggeessaatiin jiru. Qorannoon kuni kan geggeeffamaa jiru buufata qorannoo naannoo Kolanitti argamu keessatti. Hoogganaan garee qorannoo kanaa, Bernhard Hoffschmidt, ‘ifnana adduu lafa irratti uumudhaan aduu gara lafaa fiduudhaaf carraaqaa jirra’, jedhe.
Ifnanni aduu ‘adduu namtolchee’ kuni kan tolfamte ifaa humna cimaa qabu 149 iddoo tokkotti akka ifu taasisudhaan. Ifaanni bifa kanaan uumame kuni si’a 10,000 ifnana aduu caaluu danda’eera. Ammas, Ifnanni kuni oo’a seelshiyesii 3,000 oli ta’u maddisiisuu danda’eera. Ciminni humna ifnana kanaa huurka bishaanii gara Hydrojiinii fi Oksijiiniitti gargarbaaseera. Egaa, yaaliin saayinsitoota kanaa Haydroojiinii bishaan irraa bifa kanaan argamutti dhimma bayuudhaan anniinsa (boba’aa) konkolaataan, xayyaarrii fi wantoonni biraa ittiin hojjatan uumuuudha.
Qorannoon kuni qama carraaqqii saayinsistoonni anniinsaa Kaarbondaayoksaayidii irraa walaba ta’e uumuudhaaf godhaniidha.
Previous articleRakkoon sirni Woyyaanee keessa seene waan haaromsaan furmaata argatu hin fakkaatu
Next articleWoyyaaneen labsii yeroo muddamsuu baatii afuriin dheeressuu ifa goote